Man United Oo Ka Hor Istaageysa Bruno Fernandes Gudashada Waajibaadka Xulkiisa
Xidiga ka tirsan kooxda Parma Chaka Traorè oo taariiq ka dhigay horyaalka talyaaniga.
Real madrid oo war kasoo saartay dhaawicii soo gaaray Lucas Vasquez.
Paolo Maldini oo xaqiijiyay in Zlatan Ibrahimovic uu dhawaan saxiixi doono heshiis cusub.
Inter milan oo qorsheyneysa ineey sii heystaan Nicolo Barella.
Zinedine Zidane oo ka Hadlay guusha Barcelona laga gaaray iyo Cadaadiska Saaran Kooxda
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Man United oo ka hor istaageysa Bruno Fernandes gudashada waajibaadka xulkiisa
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka hor istaagi karto Bruno Fernandes inuu ku biiro xulka qaranka Portugal kulamada caalamiga ee bisha Maarso.
Iyada oo cudurka faafa ee coronavirus iyo noocyo kale oo cusub ay weli ka sii socdaan adduunka oo dhan, kooxaha Premier League waajib kuma aha inay sii daayaan ciyaartooyda Boortaqiiska ama Koonfurta Ameerika kulamada soo socda ee kulamada caalamiga ah.
Sababtoo ah Portugal oo ku jirtay liiska casaanka ee dowladda UK, Fernandes waxaa lagu qasbi doonaa inuu maro 10 maalmood oo gooni-isu-taag ah markii uu ku soo laabanayo waddanka, taasoo la micno ah inuu seegi doono kulamada bisha Abriil ee Brighton & Hove Albion iyo Tottenham Hotspur.
Natiijo ahaan, Manchester Evening News ayaa sheegeysa in Man United laga yaabo inay ka horjoogsato kubadsameeyaha inuu ka qeyb qaato kulamada isreebreebka Koobka Adduunka ee bisha dambe ee Azerbaijan, Serbia iyo Luxembourg.
Iyadoo dalal badan oo Koonfurta Ameerika ah ay sidoo kale ku jiraan liistada, warbixinta ayaa intaas ku dareysa in Liverpool ay durbaba doorteen inaysan u ogolaan Alisson , Fabinho ama Roberto Firmino inay la xiriiraan Brazil kulamada bisha Maarso.
Fernandes, oo dhawaan ugu yeeray Man United inay tirtiraan “qaladaadkooda badan” , ayaa dhaliyay goolkiisii ​​13aad ee Premier League xilli ciyaareedkan kulankii sabtidii ay barbaraha 3-3 la galeen Everton ee ka dhacay Old Trafford.
Previous articleBarcelona oo guul ciriiri ah ka gaartay Real Betis Horyaalka La-Liga
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga ee maanta: Son, Ramos, Zaha, Ibrahimovic, Ndombele
Xidiga ka tirsan kooxda Parma Chaka Traorè oo taariiq ka...
Paolo Maldini oo xaqiijiyay in Zlatan Ibrahimovic uu dhawaan saxiixi doono...
Wararka Ciyaaraha Maanta2527
Suuqa kala iibsiga1028